Iskudayga IS ku qabsaneyso Merea. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Iskudayga IS ku qabsaneyso Merea.
Iskudayga IS ku qabsaneyso Merea.
Dagaal culus, ayaa laga soo sheegayaa waqooyiga Suuriya oo kooxda Khilaafada Islaamku isku dayeyso inay qabsato magaalada ay falaagadu haysato ee Marea.
Ciidamada kooxda Khilaafada Islaamka, ayaa aroortii hore qaaday weerar taangiyo iyo gawaari bambooyin sida. Tani ayaa ka dambeysay kooxda oo horay ugu socotay goobtaasi maalintii jimcaha.
Qaramada Midoobay, ayaa sheegaysa in rayidka ka qaxaya dagaalka ay qabsatay xabadaha lays dhaafsanayo. Waxaana laga walaacsan yahay xaaladda ay ku jiraan dad ka badan 160 ruux oo barakacayaal ah oo deganaa agagaarka safka hore ee dagaalka oo u dhow xadka Turkiga.
Dhinaca kale, militeriga Turkiga, ayaa sheegaya in gantaalo ay riydeen lagu dilay in ka badan boqol Kooxda Khilaafada Islaamka Suuriya. Turkiga, ayaa sheegay inay beegsadeen dagaallamayaasha kooxda Khilaafada oo doonayay inay gantaalo xadka kaga soo weeraraan Jimcihii. Ma cadda sida ciidamadu ku heleen tirada saxda ee dhimashada ee ay ka geysteen dhul ay kooxda Khilaafada Islaamku haysato, mana jirto warbixin madax banaan oo laga helay goobtaasi.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Habeen 28-05-2016
Next articleTOP NEWS: Eden Hazard oo sheegay in uu ‘99% hubo inuu sii joogi doono garoonka Chelsea xilli ciyaareedka soo socda
Wasiir Beyle oo saxiixay heshiiska Cusub ee Bangiga Adduunka
Iran: Mas’uul kale oo uu ku dhacay cudurka Corona
Itoobiya oo dalbatay in la hakiyo wada-hadallada Nile
Soomaaliya iyo Suudaan oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah
Dowladda Somalia oo ka hadashay Go’aankii Bangiga Adduunka
Wasiirka Wasaaradda maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa saxiixey heshiis ku saabsan wanaajinta iyo dub-u-soo laabashada Soomaaliya ee Wadashaqeyntii tooska aheyd ee...